Lavina diamond pads Ndị na-emepụta na ndị na-eweta ihe | China Lavina diamond pads Factory
Lavina diamond egweri akpụkpọ ụkwụ nwere okpukpu abụọ gburugburu
A na-eji akpụkpọ ụkwụ Lavina diamond na-egweri akpụkpọ ụkwụ nwere akụkụ okpukpu abụọ maka Lavina n'ala igwe na-egweri, okpukpu abụọ buru ibu na-eme ka ọ dịkwuo ogologo ma ghara ịhapụ ihe omimi miri emi n'ala. Ntugharị ntọala ngwa ngwa dị mfe ịwụnye na wedata site na igwe.
Akụkụ akụkụ anọ nke Lavina diamond egweri ngọngọ
Ihe mgbochi Lavina nke nwere akụkụ 2 rectangle dị nkọ ma nwee ogologo ndụ ogologo oge, nke dị mma maka nhazi elu na nkwadebe. dị iche iche agbụ dị ka dabara dị iche iche hardness nke ala.
Lavina okpukpu abụọ Rhombus nke diamonds ihe egweri ihe
Akụkụ Rhombus okpukpu abụọ na-egweri diamond na-eme ihe ike karịa akụkụ nke oge niile, ọ na-eme ka ihe ọkụkụ dị n'ala na-egweri arụmọrụ. Dị iche iche metal agbụ bụ maka dị iche iche hardness sink ala. Agba na akara ahaziri dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.